Badinga ukubongwa abezimo eziphuthumayo | News24
Badinga ukubongwa abezimo eziphuthumayo
Kwelomphakathi ngithi akengibeke uvo lwami ngabantu abathwala kanzima kodwa singababongi siwumphakathi. Kumele sikwamukele ukuthi uma singakavumi ukuhlonipha imithetho yemigwaqo izinhlekelele ziyohlale zikhona emigwaqeni.
Kunabantwana babantu ababhekana nobunzima mihla namalanga ngenxa yabantu abafuna ukukhombisa ubunsizwa nobuqhawe emigwaqeni, baqinise amakhanda kungenasidingo.
Izinhlekelele eziningi zidalwa ngukungalandeli izimpawu zomgwaqo, nokufuna ukuhlonipha uma sibona amaphoyisa.
Ngivumele mhleli ngibabonge abasebenzi bezimo eziphuthumayo ngokusebenza ngokuzinikela uma beya lapho kuvele khona inhlekelele.
Uma beya lapho kusuke kuvele khona inhlekelele basuke bengazi ukuthi bazohlangabezana nani. Hlezi bebhekana nezimo ezinyantisa igazi, izimo ezethusa wena usekhaya ubona amazwibela kumabona kude.
Kangakanani bona ababhekana nazo bukhoma, behlise ukwethuka basize labo bantu abasuke belimele, abanye sebeshonile.
Zimbalwa izikhulu zethu ezithi uma zifika zinikine amakhanda, bese zibabonga ngomsebenzi abayenzile. Imindeni nezihlobo zabasuke bekwinhlekele belashelwa ukwethuka baphinde belulekwe ngokwengqondo, akaze ngizwe kuthiwa nabosizo oluphuthumayo bazokwelashwa okanye belulekwe.
Nakuba beqeqeshiwe kodwa kunezimo ezinzima kakhulu ezibahlukumezayo nabo emiqendweni.
Kuyenzeka kulimale abantu abaningi abagcina sebeya ezibhedlela ezahlukene, ezibhedlela bangcono basuke belapha abantu asebelutholile usizo lokuqala, asebekhishiwe ezimotweni eziboqokile.
Nakuba nabo bebhekana nobunzima kodwa abakudingayo ukwelulekwa ilaba abagijimayo beya lapho kuvele khona inhlekele umuntu afike angazi kwakuthi uzoqala ngakuphi.
Kulula uma usaqeqesha ngonodoli kodwa uma sewubhekene naso bukhoma isimo esiphuthumayo, kunzima. Kukhona lapho befika bangazi ukuthi kumele baqale kuphi, kodwa ngenxa yokuzinikela bayihlenge imiphefumulo.
Uma kukhona abashonayo yibo ababhekana nalezo zimo, kodwa nasemingcwabeni akaze ngizwe bebongwa. Ngifuna ukusho ngingesabi ngithi kubo: izandla zedlula ikhanda, siyayibona imisebenzi yenu. Sengathi nalaba bashayeli abangafuni ukudedela izimoto zosizo oluphuthumayo emigwaqeni bangafunda ukuzidedela. Mhlawumbe kawugudluki nje isihlobo sakho lesi esisengozini abasiphuthumayo.
Singabashayeli nabasebenzisi bemigwaqo asikhumbule ukushiya ubuqhwaga emakhaya ukuze sivikele imiphefumulo ephuma kungenasidingo. Ngiyabonga ngokuthola isikhala kwelomphakathi